Border authorities need to be vigilant - The Standard
HomeOpinion & AnalysisBorder authorities need to be vigilant
The reopening of the country’s borders last week almost nine months after they were closed to slow down the spread of the coronavirus has presented Zimbabwe with yet another formidable test in its efforts to keep the pandemic under control.
In Zimbabwe, the Covid-19 cases breached the
10 000 mark last week and there are indications that infections and deaths are rising again after a slowdown in previous months.
Some opportunists are taking advantage of the travellers’ desperation to sell fake Covid-19 certificates, which people are presenting at the borders.
The proliferation of the fake Covid-19 test certificates should be a wake-up call for Zimbabwean authorities to tighten their systems to avoid cross-border infections.
South Africa is considered an epicentre of the respiratory disease on the continent and the number of people testing positive after returning from the neighbouring country shows how important it is to ensure that Zimbabwe’s borders have strong disease surveillance systems.
Prevention remains Zimbabwe’s only viable option to bring the pandemic under control.
Previous articleCovid-19 is affecting more men than women in Zimbabwe
Next articleNews headlines over reform headways